Xildhibaan Aadam Isxaaq Cali – Kalfadhi
Mudane Aadam Isxaaq Cali oo ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka tobanaad ee federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, 24-kii Luulyo 1987.
Xildhibaankan ayay doorashadii u dambeysay ee Diseembar 2016 u ahayd markii ugu horreysay oo uu kursi ku yeesho Golaha Shacabka. Waxaa laga soo doortay degmada Luuq ee gobolka Gedo oo hoostaga maamulka Jubbaland.
Mudanaha oo ku cusub siyaasadda, wuxuu horay uga shaqeyn jiray wacyigelinta bulshada. Intii aan xilkan loo dooran wuxuu qeyb ka ahaa mashruuca Disarmament Demobilization and Reintegration (DDR) oo hub-ka-dhigis, wacyigelin iyo dhaqan-celin loogu sameynayay dhallinyarada isaga soo baxda Al-Shabaab. Mashruucaas wuxuu hoostagayay wasaaradda Amniga ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Qorshahiisa iyo rabitaankiisa ma ahayn inuu galo arrimaha siyaasadda, gaar ahaan baarlamaanka, hase yeeshee odayaasha deegaankiisa oo u arkay aqoonyahan mudan xilka ayaa ku dhiirrigeliyay, kuna garab siiyay qabashada mas’uuliyaddan.
Dalka Suudaan ayuu shan sano waxbarasho u joogay. Sanadkii 2014 ayuu shahaadada heerka koowaad (Bachelor Degree) ka qaatay kulliyadda lagu barto cilmiga Fiisikiska iyo Injineerinka (Pure and Applied Physics) ee Jaamacadda Caalamiga ah ee Afrika.
Xildhibaankan da’da yar ee aan weli guursan ayaa ka baxay dugsiga sare ee Khadija Model School oo ku yaalla xaafadda Madiina ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir.
Himillada ugu weyn ee uu doonayo in uu gaaro muddo-xileedka uu ku fadhiyo kurisigaan waa in uu dalkiisa iyo dadkiisa gaarsiiyo sarreynta sharciga iyo waddaniyad isku tashi ah.
Xildhibaanka oo aan weli xubin ka ahayn xisbi siyaasad ayaa xiriir joogto ah la leh dadka deegaanka laga soo doortay, si uu ula socdo waxna uga qabto baahiyaha jira.